Gudoomiyaha Golaha shacabka oo baaraya keydka lacag laga jari jiray xildhibaannada – Kalfadhi
Gudoomiyaha Golaha shacabka oo baaraya keydka lacag laga jari jiray xildhibaannada
Gudoomiyaha Golaha shacabka Maxamed Mursal ayaa sheegay in baaritaan dhab ah ay ku sameyn doonaan waxa laga yeelay lacago la tilmaamay in laga jari jiray mudanayaasha Golaha shacabka si markii xaalad deg deg ah timaado loogu baxsado.
Arintaan keydka lacagahaasi ayaa Golaha shacabka waxaa ka iftiimiyay mudenayaal ka tirsan Golaha shacabka xili laga doodaayay sidii gurmad loogu uruurin lahaa dadka Beledweyne ay saameyeen biyaha Wabiga.
Mudanayaasha qaar ayaa u sheegay in gudoomiyaha soo cadeeyo lacagihii laga jaray mushaaradkoodi sanadkii 2017 iyo bilihii ugu horeeyay ee 2018ka.
Mid kamid ah xildhibaannada jeedinayay dooda gurmadka ee reer Beledweyne ayaa shaaca ka qaaday in bil waliba laga jari jiray $100.
Waxa ay qireen ku dhawaad $4000 inay garaayaan lacagaha keydka ku jira loona baahan yahay xiligaan in dadka loogu gurmado.
Gudoomiye Mursal ayaa shaaca ka qaaday inuusan ogolaanayn wax musuq maasuq uuna soo cadeen doona lacagahaas hadii ay sidoodi yihiin iyo in kale.
Mashruuca qiimeynta bulaacadaha Muqdisho oo maanta la daah furay
Duqa Muqdisho oo golaha aqalka sare u gudbiyay wax qabadka maamulkiisa